Nrụpụta - Teknụzụ nzacha
N'ịdabere na uru nke akụrụngwa ụlọ ọrụ nke Runner Group na ahụmịhe ọgwụgwọ mmiri anyị kemgbe ọtụtụ afọ, Filter Tech achọpụtala ngwakọta na-ele anya nke teknụzụ nwere ọgụgụ isi dị elu na ahịrị ngwaahịa nzacha mmiri anyị dị ugbu a.
Anyị wuru ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na -agbanwe agbanwe iji nweta mgbanwe nhazi ọgbakọ. Ọrụ synchronous na -enye anyị ohere ịmalite ihe karịrị otu ọrụ n'otu oge nke na -emepụta sistemụ arụmọrụ ka mma yana na -enye azịza ndị ahaziri iche.
N'iji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akụrụngwa akpaaka dịka robot, ihe mmetụta, sistemụ na -ebugharị akpaka iji weghara ọrụ aka, anyị enwetala akpaaka ntụtụ, ịkpụzi nzacha, mgbakọ ngwaahịa, nyocha inline ngwaahịa iji melite arụmọrụ arụmọrụ.
Site na imepụta Integration of Informatization and Industrialization platform, anyị na -eji nwayọ ghọta njikwa ozi nke ahịa, R&D, yinye ọkọnọ na ọrụ nhazi.
Ọtụtụ ọrụ na -eme n'otu ọnọdụ ọrụ
Hapụ ndị ọrụ
Akpaaka na -enyere aka mezue ọrụ na ndị ọrụ pere mpe ma nwekwuo nrụpụta
Na -akwalite ozi
Jiri nke nta nke nta nweta nkwalite azụmaahịa na nkwalite njikwa
Ike nke RPS
Ịmepụta Ahụike Ọhụrụ, Nchekwa na Ndụ Ọhụrụ
Kemgbe 2010, anyị na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ndụmọdụ Toyota Group na -arụ ọrụ iwebata Lean Management. Kama ịnakwere ya kpamkpam, anyị tinyere mmụọ nke TPS (Toyota Production System) n'ime mkpa nke ọrụ azụmaahịa anyị, nke butere mmepe nke echiche nke anyị RPS (Runner Production System). Iji nye gị ngwaahịa nwere ọnụ ahịa ka mma, anyị emejuputala nkwalite RPS iji ghọta njikarịcha njikwa adịghị mma yana nkwalite mma. Ọzọkwa, kwa afọ, anyị na ndị na -ebubata anyị na -aga maka mmụta na Toyota. Usoro a, nke emegogogoro n'ime afọ iri gara aga, na -enye anyị mmesi obi ike nke akụrụngwa dị mma n'ofe ọnụ ahịa, na -enye anyị ohere ijere gị ozi karịa asọmpi.
Anyị na ndị na -ebubata ngwaahịa anyị na -arụkọ ọrụ iji mee ka njikọ njikọ ọkọnọ dị omimi ma jikọta akụ. Itinye ego ndị ahụ dị oke mkpa na ịpụga ụfọdụ usoro na-adịghị mkpa na-enyere anyị aka ịnye ọrụ ọnụ ahịa ọrụ dị mma.
Igwe ikuku na -arụ ọrụ
Anyị na-agbasi mbọ ike imepụta ọnọdụ enyi na-arụ ọrụ maka ndị ọrụ anyị, wuo ụlọ ọrụ na-eme ka ọ dị ọcha na-adịghị uzuzu, guzobe usoro mmepụta dị ọcha, ahụike na ịrụ ọrụ nke ọma. Teknụzụ, anyị na -etinye "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ", "ahụike", "ọgụgụ isi mmadụ" na echiche ndụ ndị ọzọ na ngwaahịa anyị iji nye gị ohere ịnụ ụtọ ahụmịhe mmadụ na ndụ ka mma.
Njikọta Ngwunye Nweta Bara Uru
Na -arụkọ ọrụ na ndị na -ebunye anyị, Filter Tech na -eme ka mmekọrịta njikọ ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma, na -ejikọ akụ nke ime na nke mpụga, na -ewulite usoro njikọ njikọta ọkọnọ, na -ewepụta uru dị larịị nke ngwa lọjistik, nke Filter Tech nwere ike zaghachi ngwa ngwa maka mkpa gị, mee njikarịcha ọnụ ahịa ma nye azịza dị mma. maka gị.
Sistemụ osmosis kacha mma, Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri, Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ, Njikere nzacha,